Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / 10ka tuubbooyin ee buufiyuhu ugu sareeya ee aad ka iibsan karto khadka tooska ah
2020 / 09 / 09 QoondayntaTilmaamaha qasabada 738 0
Mararka qaar waa shaqooyinka ugu fudud ee nolosha kuwaas oo ah kuwa ugu jahwareerka badan, sida qaadida qashinka qashinka lagu rido ama lagu dhajiyo weel culus oo biyo ah jikada ilaa shooladda. Taasi waa sababta qasabadaha buuxinta dherigu ay caan u noqdeen.
Tuubbada wax buuxisa ee dheriga ah ayaa noloshaada kuu fududeyn doonta adiga oo kuu oggolaanaya inaad si toos ah ugu buuxiso dheryahaaga biyaha dushiisa dabka. Isla marka aad bilowdo u adeegashada tuubadaas, in kastoo, waxaad ogaatay inay jiraan fursado aad uga badan intii aad moodeysay.
Sideed u dooran kartaa taam ku habboon jikadaada? Waxaan kuu sameynay shaqadii lagaa rabay waxaanan ku soo koobnay 10-ka xul ee ugu sareeya xulashada qasabadaha ugu fiican ee dheriga.
Doorashada ugu sareysa ee ugu sareysa:
Delta Qaab-dhismeedka Dhismaha Mount-Delta
Qalabka bilicsanaanta casriga ah, ma heli doontid wax ka wanaagsan Delta Casriga. Waxay leedahay qaab cajaa'ib leh, nadiif ah, waana fududahay in la shaqeeyo. Waa isku dheelitirnaan habboon oo udhaxeysa qaabka iyo waxqabadka, iyadoo sumcadda lagu kalsoonaan karo ee Delta ay ka dambeyso.
Tani Delta qasabadaha buuxiye ku soo degay lambarka # 1 ee liistadayada sabab. Waxay leedahay tayo iyo qaab labadaba isboorti, waana isafgarad kugu filan si ay kuu siiso biyo marin markaad rabto iyo meel aadan rabin.
Maxaan u Jeclahay:
Tayada Summada leh
Delta waxay jirtay ilaa iyo 1950-yadii waxayna soo waday qasabado tayo sare leh tan iyo markaas. Qalabka qasabadda, waxaad ku kalsoonaan kartaa inaad heshay wax soo saar u adkaysan kara waqtiga.
Tuubadaani waxay leedahay gaadh 24-inji ah, taas oo ka sii dheereysa inta badan dhalooyinka isku buuxiya dheriga. Isla mar ahaantaana, waxay isku laaban tahay inay ku fariisato iyadoo derbiga lagu dhejinayo marka aadan isticmaalin.
Kala Duwanaanshaha Naqshadda
Muuqaalka casriga ah ee qasabadani waa midab qurux badan, laakiin Delta sidoo kale waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka doorato lix dhammeystir si aad ula jaanqaadid jikadaada: arctic ahama, madow ahaanta, naxaasta champagne, chrome, matte black, iyo ahama.
Delta Contemporary wuxuu leeyahay labo waalka furan: midi wuxuu u dhaw yahay madaxa qasabada iyo mid kale oo u dhow derbiga.
2. WOWOW Dheriga Weelka Filinka Jikada
Muuqaalka xaglaha, warshadaha ayaa caan ku ah guryaha dalka oo dhan. Hadday taasi tahay qaabkaaga doorashada, ka WOWOW Dheriga Buuxi Feelaha waxay noqon kartaa waxaad raadineysay.
Inta badan qasabadaha buuxi dheriga ayaa kaliya bixiya biyo qabow sidaa darteed waxay u baahan yihiin kaliya hal soo saar biyo ah. WOWOW tubbada ayaa ka mid ah kuwa yar ee bixiya biyaha kulul iyo kuwa qabow labadaba. Si kastaba ha noqotee, ikhtiyaarkan ayaa kaliya lagu heli karaa dhammeystir gaar ah waxayna u baahan tahay laba galitaan biyo.
Doorashada qasabadda saxda ah waxay ku saabsan tahay wax ka badan qaabka iyo habboonaanta. Waxay ku saabsan tahay caafimaadka qoyskaaga iyo badbaadadiisa sidoo kale. Taasi waa sababta aan u jecel nahay tikniyoolajiyadda gaarka ah ee WOWOW ay u adeegsato kahortagga miisaanka iyo daadinta macdanta qasabadda iyada oo waliba ka dhigeysa mid miridh-caddeyn iyo daxal-caddeyn
Aeration tayo sare leh
Hawl wade ku jira qasabadaada ayaa ah hab fiican oo lagu yareeyo buufinta isla markaana loo helo shubnaan kafiican. Tuubbada buuxiyaha dheriga waxay adeegsaneysaa hawo sare Neoperl si loo hagaajiyo tayada.
3. IMLEZON Dheriga Fiilaha Faylka
Maxaad sameysaa haddii aad rabto qasabad buuxisa weel kaambeeya jikadaada casriga ah laakiin aad ku jirto miisaaniyad adag? Waxaad u qaadan doontaa waxa xiga ee ugu wanaagsan Delta Casriga ah: muuqaal ah Habka IMLEZON oo leh qiimo qaali ah.
Buuxinta Bilaash La'aan
IMLEZON qasabada ayaa leh hawo-dhise ku dhex jira. Markaad biyahaaga shubayso, hawaduhu wuxuu abuurayaa shub ka sii jilciya si aadan biyo ugu saydhin dushaaga cuntada inta hawshu socoto.
Daadku waa walaaca ugu sarreeya ee qasabad kasta, laakiin IMLEZON waxay ku rakibtay qasabaddan dhuxul dhoobada adag ee naxaasta ah si khatartaas loo yareeyo.
Dusha sare ee kaydadka tayada sare leh, tuubadaani waxay isticmaashaa tuubooyin bir bir ah oo waara oo la hubo inay soconayaan sanado iyadoon la abuurin daadin.
Marka ay timaado tayo iyo qaab wanaagsan qiimaha, ma garaaci doontid qasabadani. Waa mid ka mid ah qasabadaha ugu qiimaha jaban ee liiskan laakiin leh tayo iyo astaamo aanad meel kale ka heli doonin.
Jiko kasta oo casri ah, qasabadahaagu waa inay dhammaystiraan qaabkaaga halkii aad ka jeedin lahayd. Muuqaalka casriga ah ee tuubada 'IMLEZON' ayaa qaban doonta shaqadaas.
4. MSTJRY Dheriga Faylka Faylka
Kawaran haddii aad rabto dhammaan raaxada qasabada buuxinta dheriga laakiin jikadaadu waxay leedahay muuqaal muuqaal ah oo ka duwan kan casriga ah? Xaaladdaas, Qasabada MSTJRY ayaa ku habboon gurigaaga.
Socodka Degdega ah
Qofna ma doonayo inuu waqti qaali ah ku qaato buuxinta dheri, gaar ahaan haddii aad wax ku karinayso qaybo badan. Dheriga MSTJRY wuxuu leeyahay xawaare ka dheereeya inta badan qasabadaha buuxiyo dheriga, oo leh qulqulka socodka 5.5 GPM marka la barbar dhigo celceliska 3-4 GPM.
Haddii aad taageersan tahay bilicsanaanta dhaqanka, ha u sii jeedin. Naqshadeynta, naqshadda quruxda badan ee MSTJRY dheriga qasabadda ayaa buuxin doonta kaamil ahaanta jikadaada.
Wareeg isku dheelitiran
Kaliya uma baahnid buuxinta dheriga oo leh marin biyoodka aad rabto. Waxaad ubaahantahay inaad awoodid inaad gaarto xaglaha saxda ah iyo aagagga. Tuubadaani waxay leedahay wareega 360-digrii ah si aad dherigaaga ugu buuxin karto wax kastoo guban kara si fudud.
Tubooyinka qasabada wax ka buuxiya ma ahan kuwo raqiis ah, sidaa darteed waxaad dooneysaa in taada ay waarto. Taasi waa sababta dammaanadda xadidan ee MSTJRY ee shanta sano ah ee xadidan ay tahay gunno intaas le'eg.
5. Delta Dhaqameed-Buur qasabadaha
Kawaran haddii aad jeceshahay wax walba oo ku saabsan dherigayaga dheriga buuxiya marka laga reebo qaabka casriga ah? Haddii ay sidaas tahay, midkani adiga ayuu kuu yahay. Tani Qaabka Delta waxay la wadaagaan astaamo iyo faa'iidooyin badan oo la mid ah Casriga, laakiin leh naqshad dhaqameed.
Dhamaan qasabadaha looma dhisin inay waaraan, laakiin kani waa. Waxaa laga dhisay naxaas, taas oo ah walxo gaar ahaan u adkeysan kara qasabadaha.
Sidii aan soo sheegnay, qasabadani waxay buuxinaysaa tuubbo naxaas ah, laakiin taasi micnaheedu maahan inay u egtahay dib u celin 1990s. Xaqiiqdii, waxaad haysataa xulashadaada lix dhammeystir qurux badan: Arctic ahama, naxaas champagne, chrome, nickel, ahama, iyo naxaas Venetian. Qasabadaha faro ku tiriska ah ayaa leh xulashooyin badan oo qurxin ah.
Waxaad horeyba u ogayd in qasabadaada Delta ay waari karto, laakiin marwalba waxaa jirta fursad dhibaato layaab leh oo khadka ah. Delta waxay kaa yareynaysaa cabsidaada adiga oo ku siinaya damaanad xaddidan oo dhan oo ah tuubada.
Mararka qaar way mudan tahay in lagu kala boodo si loogu daro qiyaas raaxo ah jikadaada. Hadday taasi tahay waxa aad raadineyso, ha uga fogaan Moen S665SRS qasabada qasabada
Tayada aan laga adkaan karin
Xaqiiqda fudud ayaa ah in markaad rabto tayada, Moen uu yahay doorashada ugu sareysa. Tani waa tuubada ugu qaalisan ee ku jirta liistadayada laakiin iska hubso in tayada ay ku nooshahay qiimaha qiimaha.
Si Joogto Ah Fiiri
Qasabadda qasabadaadu waxay umuuqan kartaa wax fiican markii ugu horeysay ee aad rakibatid. Kadib waxaad bilaabeysaa inaad noolaato noloshaada kahor intaadan ogaanin, waxay ku daboolan tahay baro iyo qiiq. Haddii aad doorato dhammaadka birta ah ee qaabkan, waxaad heli doontaa faa'iidada muuqaalka u adkeysiga u leh maalinba maalinta ka dambeysa.
Dhamaadka biraha ah waa dhamaadka kaliya ee bar-adkaysi u leh, laakiin tuubadaani waxay sidoo kale ku timaaddaa madow madow, chrome, ama dahab caday.
Cadeyn Cimri dheer
Xasiloonida maskaxda ma sahlana in la helo, laakiin Moen waxyar ayuu ka fududeeyaa noloshooda oo xaddidan oo damaanad qaad ah oo ku saabsan qasabadda dherigaaga.
Kingston Brass waa nooc caan ah oo si fiican loo ixtiraamo sabab ahaan. Waxaad arki kartaa tayadooda oo soo galaysa KS8103DL tuubada wax buuxisa.
Fursadaha Dhameystirka Gaarka ah
Inta badan qasabadaha ku jira liistadani waxay ku yimaadaan dhammaadyo badan, laakiin waxaad u muuqataa inaad aragto qaar ka mid ah dhammaystirka in ka badan kuwa kale. Moodelkan Kingston Brass wuxuu ku yimaadaa dhammaadyo gaar ah oo aadan arkin inta badan, sida naxaasta la safeeyey iyo naxaas saliid lagu duubay. Waxa kale oo aad ku heli kartaa naxaas qadiim ah, nikkel nijaasaysan, iyo chrome dhalaalaya.
Dhismo Tayo Sare leh
Layaab ma leh, qasabaddan Kingston Brass waxaa laga sameeyay naxaas. Kaliya ma aha naxaasta heerka ugu sarreeya ee walxaha qasabadda si looga hortago daadashada iyo daxalka, laakiin naxaasku waa takhasus soo saarahaan. Tani waxay kuu sheegaysaa inay u badan tahay inay leedahay dhisme adag.
Tuubbada kasta waxay leedahay heerka socodka kala duwan. In kasta oo dad badani doorbidaan qulqulka socodka dhakhsaha badan ee dhaqsaha buuxsama, kuwa kale waxay jecelyihiin socodka socodka hoose sidaa darteed waxaa jira khatar hoose oo ah in la buufiyo. Haddii aad jeceshahay socodka fudud, tubadan '3.8 GPM' ayaa kugu habboon adiga.
8. WOWOW Wall Mount Brass Qasabadaha
Qasabadaada qasab kuma aha inay ka shaqeyso oo keliya naqshadda jikadaada. Waxay noqon kartaa lahjadda casriga ah kaligeed. Haddii taasi u egtahay aragtidaada tuubada buuxisa dherigaaga, waxaad u baahan tahay inaad aragto WOWOW Mount Mount Naxaas Qasabadaha.
Design gaar ah
Muuqaalka asalka iyo soo jiidashada badan ee qasabadani waa nashqadaynta. Kala-goysyada adduunka oo kale ah waxay siinayaan muuqaal madadaalo iyo moodel leh, oo u beddelaya gabal farshaxan oo waliba shaqeynaya. Kala doorashada ikhtiyaariga ah ee nilaylka la caday, chrome, iyo naxaas saliid lagu duubay, waad ku raaxeysan kartaa faa'iidooyinka iyadoon loo eegin nooca midabka jikadaada ay noqon karto.
Ma aha in qof kastaa leeyahay miisaaniyad uu ku iibsado tuubada buuxisa dusha sare ee khadka. Haddii aad ku cusboonaysiinaysid jikadaada miisaaniyad, qasabadani way fududaan doontaa shandadaada.
Ku rakibida fudud
Rakiibintu waa mid ka mid ah qaybaha ugu adag uguna qaalisan ee tuubbada buuxisa dheriga gidaarka ku rakiban. Haddii aad horey u haysatid tuubooyinku u dejiyeen sida aad ugu baahan tahay, qasabaddan waxaa loogu talagalay inay fududaato in la rakibo naftaada.
9. Filimka American Struuter S Pot Filler
Heerka Mareykanka wuxuu muddo dheer ahaa sumcad lagu kalsoon yahay oo qasabadaha, iyo tan Studio S Pot Filler waa ka reeban Tuubadaani waxay isku daraysaa naqshadeynta iyo tayada qurxinta hadana shaqeyneysa ee lagu daro jikada.
Qasabada Studio S waxaa loogu talagalay tuubooyin nadiif ah, fudud oo toosan. Tani waxay abuureysaa naqshad casri ah oo aad uyar oo sifiican uga dhex muuqan doonta jikadaada iyadoo aan laga jeedin qaabka qolkaaga.
Ma jiraan wax ka muhiimsan nabadgelyada qoyskaaga, oo Heerka Mareykanka ayaa og tan. Taasi waa sababta ay ugu adeegsadeen dhismaha gebi ahaanba bilaa rasaasta macdanta qasabadda sidaas darteed ma jiraan wax khatar ah oo macdanta `` lead '' ay ku daadan karto cuntadaada.
Cidina ma rabto qasabad soo daatay, mana u baahnid inaad ka walwasho taas Studio Studio S. Qalabka dhoobada dhoobada waa muuqaal tayo sare leh oo ka hortagaya qulqulka sanadaha soo socda.
10. Kohler K-22067-BL Qalabka Buuraha Dheriga
Tuubadaani waxaa laga yaabaa inay ku timi # 10 liiskayaga laakiin xusuusnow inay weli ku jirto tobankeenna ugu sarreeya ee ka mid ah qasabadaha buuxiyeyaasha dheriga ee suuqa ku jira. Haddii aad taageere u tahay madoowga madow, chrome dhalaalaya, ama dhameystir aan fiicnayn, tan Tuubada Kohler dheriga qasabada waxay leedahay wax badan oo la bixiyo.
Xulashada Deck Mount
Sidaad aragtay, dhammaan qasabadaha dheriga dheriga ee liistadani waa kuwo gidaar lagu xiray. In kasta oo taasi ay tahay xulashada ay doorbidayaan dadka badankood, kuwa kale maahan kuwo jecel inay qasabad ku heystaan ​​darbigooda. Si ka duwan tuubbooyinka kale, Kohler-kan wuxuu bixiyaa dusha sare ee dusha sare iyo sidoo kale ikhtiyaarka dusha sare ee derbiga si uu ugu habboonado jikada qof kasta.
Haddii aad taageere u tahay muuqaalka warshadaha, tani waa tuubada kugu habboon adiga. Qasabadu waxay shabahaysaa muuqaalka dhuumaha tuubooyinkii birta hore, taas oo siinaysa qaab gaar ah oo isugu jira mid warshadeed iyo mid gadaal ah.
Mudnaan Dheeraad ah
Markaad haysatid qasabad buuxiyaha dheriga oo sifiican ushaqeysa oo quruxsan jikadaada, waxaad dooneysaa inay ku ekaato. Qaabkan, ma aha oo keliya inaad haysato tayada la og yahay ee astaanta Kohler, laakiin qasabaddaadu waxay leedahay waalka dhoobada dhoobada oo ka sarreeya heerarka tayada warshadaha.
Doorashada Tuubadaada Filter Fiilaha
Qasabadaha buuxinta dheriga dhammaantood waxay yeelan karaan ujeedo isku mid ah, laakiin sida aad ka garan karto liiskan, sidoo kale waxaa jira kala duwanaansho ballaaran oo ka yimaada hal nooc ilaa kan xiga. Macno malahan qaabka jikadaada, ciriirigaaga boos, iyo baahiyahaaga, waxaad ka heli kartaa xulasho adiga liiskaan ah.
Xulashooyin badan oo ah alaabada ugu sareysa gurigaaga, hubi inbadan oo kamida boggaga internetka.
Hore:: Falanqaynta Suuqa Weelasha Qasacadaha Iyadoo Ciyaartoy Muhiim Ah, Codsiyada, Isbedelada Iyo Saadaalinta Ilaa 2025 - Scientect Next: Cadaadiska ka imanaya Trump, heerarka maydhashada in dib loo eego - Wargeyska Casaanka & Madowga
2021 / 05 / 13 1253
2021 / 05 / 09 905
2021 / 05 / 08 796
2021 / 02 / 04 821
2021 / 02 / 03 841
2021 / 02 / 03 908